MWC 2017: Huawei P10 iyo LG G6 ayaa rajeynaya inta hartay | Wararka IPhone
MWC 2017 wuu bilaabmay wuxuuna ku sameeyay sidaas wax aan badnayn iyo wax aan ka yarayn laba calan sida LG G6 iyo Huawei P10, oo ka mid ah taleefannada casriga ah ee hadallada ugu badan bixin doona toddobaadyada soo socda oo qaarkoodna runtii lagu tirinayo. naqshadaha xiisaha leh iyo qeexitaannada. Soo saaraha Kuuriya ayaa ku soo biirtay moodada "muraayadaha ugu yar" casriga cusub, halka soosaaraha Shiinaha uu ilaalinayo naqshad caadi ah laakiin leh qeexitaano ka saaraya halxiraalaha oo leh kamaradeeda dambe ee 20Mpx ah iyo ilaa 6GB oo RAM ah.
Shaashad aad u weyn oo 5,7-inch ah oo ah LCD ayaa haysa ku dhowaad dhammaan hore ee LG G6 waxayna leedahay qaraar dhan 2880 × 1440, oo ah saamiga 18: 9 u oggolaanaya shaashadda in loo qaybiyo laba jibbaarane oo qumman wax u adeegsada taleefannada casriga ah qaab asal ah oo sawirro looga qaado isla markaana aad loogu nuuxnuuxsaday inta lagu gudajiray soo bandhigidda fiidiyowga. Naqshadayntan, dareeraha faraha ayaa dhabarka ku yaal, in kasta oo shaashadda laga heli doono badhan bilaw ah oo billow ah
Waxay leedahay 4GB RAM, batari 3300mAh ah, kamarad gadaal labalaab ah 13Mpx iyo hore 5Mpx, processor Qualcomm Snapdragon 821 iyo shahaado IP68. Waxa aynaan ogeyn waa taariikhda la heli doono iyo qiimaha terminalka.
Huawei wuxuu doortaa naqshad isdaba-joog ah laakiin wuxuu siinayaa taleefannadiisa casriga ah tilmaamo dhab ah oo cajiib ah. Xaaladdan oo kale waxaan wajahaynaa laba taleefannada gacanta, P10 iyo P10 Plus, oo leh 5,1 ″ (1920 × 1080) iyo 5,5 ″ (1440p) shaashad, labaduba waxay leeyihiin labalaab 20Mpx gadaal gadaal ah iyo kamaradda hore ee 12Mpx. Si sax ah kamaraddu waxay ahayd halka ay Huawei u muuqato inay ugu sharad badan tahay, iyadoo leh saameynta Bokeh iyo aqoonsiga wajiga 3D ee astaamaha kale.
Iyada oo leh baytariyaal awood weyn leh, 3.200 iyo 3.750 mAh, Huawei P10 iyo Huawei P10 Plus waxay leeyihiin teknolojiyadda Huawei SuperCharge, moodooyinkuna waxay ku bilaabmayaan 4GB oo RAM ah. inkasta oo nooca Plus lagu heli karo 128GB oo keyd ah iyo 6GB oo RAM ah. Huawei sidoo kale wuxuu sharad ku galay midabka terminalka oo waxaan haynaa moodallo badan oo la heli karo: Hyper Diamond cut dhamaadka ayaa laga heli doonaa Dazzling Blue iyo Dazzling Gold. Greenery, Rose Gold, Mystic Silver, Graphite Black iyo Prestige Gold ayaa laga heli doonaa dhamaadka sandblast, iyo Ceramic White waxaa laga heli doonaa dhamaadka dhalaalaya sare.
Huawei wuxuu ka dhigay qiimaha iyo helitaanka rasmiga ah, waxaan awoodi doonnaa inaan la soo wareegno boosteejooyinkan laga bilaabo Maarso Spain, Chile, Mexico, Colombia iyo dalal kale oo badan oo ku yaal qaaradaha oo dhan, iyadoo qiimo udhaxeeya € 649 ee qaabka P10 oo leh 64GB iyo 4GB RAM ilaa 799 10 oo loogu talagalay qaabka P128 Plus oo leh 6GB iyo XNUMXGB RAM, iyada oo loo marayo € 699 ee P10 Plus oo leh 64GB iyo 4GB RAM ah ay ku kici doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » MWC 2017: Huawei P10 iyo LG G6 ayaa rajeynaya inta hartay
Ciise Alonso (@ismahamud) dijo
kaalay aan nuqulno tufaax, sidee asal u ahaa !!
Jawaab Jesús Alonso (@cibermusic)
Keen! waxay kaa caawineysaa inaad wax ka iibsato Apple Watch-kaaga